लुटेराको राज | NEPALINK.COM
NEPALINK.COM / व्लग / लुटेराको राज	लुटेराको राज
Written by nepalink.com. Posted in व्लग
Tagged: राज, लुटेराको, लुटेराको राज	Published on July 04, 2012 with No Comments
फेरि दृष्य बदलिन्छ -
“कहाँ सकिन्छ र” भन्नुभन्दा एकैछिन तल पढ्नुहोस् है।
हेर्नुहोस् हाम्रो देशको परिस्थिति बदल्न केवल एउटा मान्छे भए पुग्छ। २५०० बर्ष अगाडि हाम्रै गौतम बुद्धले गरेर देखाईसकेका छन् भने अहिले हामी किन यसरी अक्मकाईराछौँ भन्या ! यदि महात्मा गान्धी र मदर टेरेशाले छिमेकी भारतमा बकैदा सँग देखाई सके भने हामी के कारणलाई कुरि रा ?
अनि उत्तरमा चीनका देङ् जावोपिङ्‍‌गले करोडौँ चीनियालाई गरिवीको भुमरीबाट सम्बृद्धि तिर धकेले भने तपाँई हामी केकालाई कुरिराछौँ ! यदि उनीहरुले गरेर देखाए भने हामीले पनि अवश्य सक्छौँ !
हो, अहिले हामी सबै डराएका छौँ, दिक्क भा छौँ र आफ्नो आत्मसम्मान नै छानाबाट खस्या जस्तो लागी राछ होला । तर जुन दिन हामी यो डरलाई सामना गर्छौँ त्यो दिन देखि हामी जीतको बाटोमा हिडँनेछौँ ।
पहिले आफ्नै ईस्ट-मित्रहरुलाई आफ्ना बिचारले जित्‍न कोशिश गर्नुहोस्। यदि यसैमा फेल खानु भो भने बाहिरका हुललाई कसरी विश्वासमा लिन सक्नुहुन्छ? आफ्नैलाई रिझाउनु नै सबैभन्दा गाह्रो खुडकिलो हो हाम्रो संघर्षमा।
लेख्‍नु, अझ लेख्‍नु, धेरै लेख्‍नु ! (पहिले गुप्‍तरुपमा प्रतिक्रिया लेखेर, त्यसपछि अलि ठुलो अनि अझ ठुलो समस्याकै हल दिने तर्कहरु लेख्‍नुहोस्। तपाईँको कलमले सोचे भन्दा धेरैलाई धेरै समयसम्म प्रेरणा दिन्छ। यसरी नै आफुलाई सक्षम नेतृत्वको बाटोतिर अझ धकेल्नु।
यदि तपाईँ बिधार्थी वा अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ भने यसो आफ्नो समाजका बारेमा ठोस अनुशन्धान गर्नुहोस् न । उदाहरणको लागि- गाँउको स्थानिय निकायले के कति नागरिक उजुरीलाई वेवास्था गरिराछन् र किन? वा स्थानिय टोले क्लबले कसरी खर्च गरिराछन् र के मा? अनि यस्ता अनुशन्धान सुझाब सहित बकैदा ईन्टरनेटबाट फैलाउनुहोस् संसार भरि नेपाली माझँ। ठुलो ठुलो आँट्नु तर सानो-सानो जीतबाटै सुरु गर्नु !
अन्त्यमा यदि नेतृत्व लिनै सक्नुहुन्न भने अरुको नेतृत्वको पछि जोशले लाग्नुस् न त। हेरक सफल नेतृत्वको शुरुवात पछाडि एउटा लागि पर्ने समर्थकको अविश्मरणीय हात हुन्छ ।
त्यसो भए साथी आजै बाट के गर्दै हुन्छ त तपाईँ यो देशको कहानीको अन्त्य बदल्नको लागी ?
There are currently no comments on लुटेराको राज. Perhaps you would like to add one of your own?	LeaveaComment
Recent from व्लग Category
कोरियामा दिलशोभा सम्मान कार्यक्रम र वास्तविकता May 06, 2013
गगन थापाको नाममा March 18, 2013
माउ छोड्न बाध्य भेडीको पाठो March 11, 2013
Browse Archives for व्लग